Johani 7 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 7:1-52
Jesu paMutambo Wematebhenekeri (1-13)
Jesu anodzidzisa pamutambo (14-24)
Vanhu vanofunga zvakasiyana-siyana nezvaKristu (25-52)
7 Jesu akabva aramba achifambira muGarireya, nekuti akanga asingadi kufambira muJudhiya, nekuti vaJudha vakanga vachitsvaga kumuuraya.+ 2 Asi Mutambo wevaJudha Wematebhenekeri*+ wakanga wava pedyo. 3 Saka vanin’ina vake+ vakati kwaari: “Ibva muno uende muJudhiya, kuti vadzidzi vako vaonewo mabasa auri kuita. 4 Nekuti hapana munhu anoita chinhu pachivande achida kuti azivikanwe pachena. Kana uri kuita zvinhu izvi, ita kuti nyika ikuone.” 5 Vanin’ina vake vakanga vasingatotendiwo maari.+ 6 Saka Jesu akati kwavari: “Nguva yangu haisati yasvika,+ asi yenyu inogara iripo. 7 Nyika haina chikonzero chekukuvengai, asi inondivenga, nekuti ndinopupura nezvayo kuti mabasa ayo akaipa.+ 8 Kwidzai imimi kumutambo; ini handisati ndava kuenda kumutambo uyu, nekuti nguva yangu haisati yanyatsosvika.”+ 9 Saka paakanga avaudza zvinhu izvi, akaramba ari muGarireya. 10 Asi vanin’ina vake pavakanga vakwidza kumutambo, iye akabva akwidzawo pachivande, kwete pachena. 11 Saka vaJudha vakatanga kumutsvaga pamutambo vachiti: “Munhu uya ari kupi?” 12 Uye vanhu vakanga vachingozevezerana nezvake. Vamwe vaiti: “Iye munhu akanaka.” Vamwe vachiti: “Haasi. Anotsausa vanhu.”+ 13 Hapana hapo aitaura nezvake pachena nekuti vaitya vaJudha.+ 14 Mutambo pawakanga wava pakati, Jesu akapinda mutemberi, akatanga kudzidzisa. 15 Uye vaJudha vaishamiswa, vachiti: “Munhu uyu anoziva sei Magwaro,*+ iye asina kudzidza?”*+ 16 Jesu akavapindurawo achiti: “Zvandinodzidzisa hazvisi zvangu, asi ndezvaiye akandituma.+ 17 Kana munhu achida kuita kuda kwake,* achaziva kana dzidziso yacho ichibva kuna Mwari+ kana kuti ini ndiri kutaura zvangu ndega. 18 Wese anotaura zvake ega ari kutsvaga kukudzwa kwake ega; asi wese anotsvaga kukudzwa kwemunhu akamutuma,+ iyeye ndewechokwadi uye maari hamuna kusarurama. 19 Handiti Mozisi akakupai Mutemo?+ Asi hapana kana mumwe wenyu anoteerera Mutemo wacho. Muri kutsvagirei kundiuraya?”+ 20 Vanhu vacho vakapindura kuti: “Une dhimoni iwe. Ndiani ari kutsvaga kukuuraya?” 21 Jesu akavapindura achiti: “Ndakangoita chinhu chimwe chete, uye mese muri kushamiswa. 22 Ndokusaka Mozisi akakupai mutemo wekuchecheudza,+ (kunyange zvazvo usina kubva kuna Mozisi, asi kumadzitateguru)+ uye munochecheudza munhu pasabata. 23 Kana munhu achichecheudzwa pasabata kuti Mutemo waMozisi urege kutyorwa, nei muri kundipengera kuti ndaporesa munhu pasabata?+ 24 Regai kutonga nekutarisa kunze, asi tongai nekutonga kwakarurama.”+ 25 Vamwe vagari vemuJerusarema vakabva vatanga kuti: “Ko haasi iye here munhu wavari kuti vari kuda kuuraya uyu?+ 26 Asi onai! ari kutaura pachena, uye hapana chavari kutaura kwaari. Kungava kuti here vatongi vatova nechokwadi kuti uyu ndiye Kristu? 27 Kunobva munhu uyu tinokuziva; asi kana Kristu achiuya,+ hapana anofanira kuziva kwaanobva.” 28 Jesu paakanga achidzidzisa mutemberi akabva ashevedzera kuti: “Munondiziva uye munoziva kwandinobva. Uye handina kuzvisarudzira ndega kuuya,+ asi iye akandituma ariko zvechokwadi, uye hamumuzivi.+ 29 Ini ndinomuziva,+ nekuti ndiri mumiririri akabva kwaari, uye ndiye akandituma.” 30 Saka vakatanga kutsvaga kumubata,+ asi hapana akaisa ruoko rwake paari, nekuti nguva yake yakanga isati yakwana.+ 31 Kunyange zvakadaro, vanhu vakawanda vakatenda maari,+ uye vaiti: “Kristu paanouya, angazoita zviratidzo zvinopfuura zvaitwa nemunhu uyu here?” 32 VaFarisi pavakanzwa vanhu vachizevezera mashoko aya nezvake, vatungamiriri vevapristi nevaFarisi vakatuma varindi kuti vanomubata. 33 Jesu akabva ati: “Ndichamboramba ndiinemi ndisati ndaenda kuna iye akandituma.+ 34 Muchanditsvaga, asi hamuzondiwani, uye hamukwanisi kuzouya kwandinenge ndiri.”+ 35 VaJudha vakabva vatanga kutaurirana vachiti: “Munhu uyu ari kuda kuenda kupi, zvekuti hatizomuwani? Kuti ari kuda kuenda kuvaJudha vakapararira pakati pevaGiriki onodzidzisa vaGiriki vacho? 36 Ari kurevei kana achiti, ‘Muchanditsvaga, asi hamuzondiwani, uye hamukwanisi kuuya kwandinenge ndiri’?” 37 Pazuva rekupedzisira, zuva guru remutambo,+ Jesu akasimuka, akashevedzera kuti: “Kana munhu aine nyota, ngaauye kwandiri anwe.+ 38 Munhu wese anotenda mandiri, sezvakataurwa nerugwaro: ‘Hova dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukatikati make.’”+ 39 Asi akataura izvi pamusoro pemweya uyo vaya vanotenda maari vakanga vava kuda kugamuchira; nekuti kusvikira panguva iyoyo pakanga pasati pava nemweya,+ nekuti Jesu akanga asati akudzwa.+ 40 Vamwe vanhu vaivapo pavakanzwa mashoko aya vakatanga kuti: “Chokwadi uyu ndiye Muprofita.”+ 41 Vamwe vakanga vachiti: “Uyu ndiye Kristu.”+ Asi vamwe vaiti: “Ko Kristu anobva kuGarireya here?+ 42 Rugwaro harwuti here Kristu anouya achibva kuvana vaDhavhidhi+ uye achibva kuBhetrehema,+ musha waigara Dhavhidhi?”+ 43 Saka vanhu vakabva vatanga kupesana pamusoro pake. 44 Asi vamwe vavo vaida kumubata, asi hapana akaisa maoko ake paari. 45 Varindi vacho vakabva vadzokera kuvatungamiriri vevapristi nevaFarisi, avo vakavabvunza kuti: “Nei musina kuuya naye?” 46 Varindi vacho vakapindura kuti: “Hakuna munhu akambotaura zvakadai.”+ 47 VaFarisi vakavapindura vachiti: “Asi nemiwo matotsauswa? 48 Pane mutongi kana muFarisi akambotenda maari here?+ 49 Kunze kwevanhu ava vasingazivi Mutemo, vanhu vakatukwa.” 50 Nikodhimo, uyo akanga amboenda kwaari, uye akanga ari mumwe wavo, akati kwavari: 51 “Ko Mutemo wedu unotonga munhu kana usina kutanga wanzwa munhu wacho uye waziva zvaari kuita here?”+ 52 Vakamupindura kuti: “Asi newewo unobva kuGarireya? Ongorora uye uchaona kuti hapana muprofita achamutswa achibva kuGarireya.”*
^ Kana kuti “Wematumba.”
^ ChiGir., “zvinyorwa.”
^ Kureva, kudzidza kuzvikoro zvavanarabhi.
^ Kureva, kuda kwaMwari.
^ Zvinyorwa zvakawanda zvakare zvinovimbwa nazvo zvinosiya vhesi 53 kusvika kuchitsauko 8 vhesi 11.